Roasted Kachin Walnuts ( 80g ) သစ်ကြားသီး လှော် – SUNNY eSTORE
Roasted Kachin Walnuts ( 80g ) သစ်ကြာ...
Roasted Kachin Walnuts ( 80g ) သစ်ကြားသီး လှော်
Our roasted walnuts give an all-natural nutty flavor familiar to anyone who enjoys nuts. The smooth walnut taste rolls off your tongue as the slight roast helps give the walnuts extra flavor. Enjoy anytime of the day asahealthy snack to help your body.
ကဆန်ထီ သစ်ကြားသီးလှော်မှ သဘာဝသစ်ကြားသီးအရသာကို ခံစားရရှိစေပြီး အစေ့အဆန် စားသုံးသူများရင်းနှီးသည့် အရသာတစ်မျိုး လည်းဖြစ်ပါသည်
သစ်ကြားသီးလှော်အရသာမှ လျှာပေါ်တွင်တမူထူးခြားသည့် အရသာကိုလည်းခံစားရရှိစေပါသည်။
သစ်ကြားသီးသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်လျှော်သည့် အစားအစာဖြစ်သည့်အတွက် သစ်ကြားသီးကို ပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအထူး အထောက်အကူပြုပါတယ်။
Use: Eat within2weeks after opening.
အသုံးပြုပုံ - ဖွင့်ပြီးနောက်၂ ပတ်အတွင်းစားသုံးပေးရန်။
ပါဝင်ပစ္စည်း - သစ်ကြားသီး